केवल एक प्रश्न - साप्ताहिक
साप्ताहिक संवाददाता , असार ३१, २०७६
विवाह हुनुभन्दा पहिलेचाहिँ साउनको सोमबार निकै व्रत बस्थें, त्यतिबेला मेहेन्दी, हरियो चुरा आदि लगाउने रहरले पनि साउनको सोमबार व्रत बसिन्थ्यो । अविवाहित हुँदा राम्रो श्रीमान परोस् भनेर पनि भगवान् शिवसँग प्रार्थना गरिन्थ्यो, तर विवाहपछि भने आफ्नो परिवार र श्रीमानको सुख, शान्ति एवं दीर्घायुको कामना गर्छु । पुरा पढ्नुहोस्
नेपाली एवार्डको भ्यालू घटेका बेला सरकारले त्यसलाई बुझेर नेपाली एवार्ड आयोजकलाई, हेर एवार्ड भनेको यस्तो हुनुपर्छ भनेर देखाउन लागेको हुनुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
रोपाइँ महोत्सवलाई कसले भन्यो मड फेस्टिभल ? मलाई त थाहा छैन र त्यसो भन्नु पनि हुँदैन । आ–आफ्नै मूल्य–मान्यता हुन्छन् संस्कृतिहरूका । रोपाइँ महोत्सवको पनि आफ्नै मूल्य–मान्यता छन् । यसलाई रोपाइँ महोत्सव नै भन्नुपर्छ । यदि इङ्लिसमा भन्ने हो भने पनि ‘रोपाइँ महोत्सव’ नै लेख्नुपर्छ, जसले हाम्रो भाषालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न सक्छ । पुरा पढ्नुहोस्
कर्मचारीको २० प्रतिशत तलब बढेको चित्त बुझेन । किनभने यसले अनपेक्षित रूपमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, जसले गर्दा जनतालाई मार पर्छ । अरू क्षेत्रमा कर बढाउनुभन्दा सवारी साधनमा कर बढेको भए कम्तीमा सडकको मर्मत–सम्भार त हुन्थ्यो होला । पुरा पढ्नुहोस्
वास्तविकता थाहा नभएपछि घटना रहस्यमय हुन्छ । रहस्य शक्तिशालीहरूले साधारण मानिसहरूका लागि बनाउने राजनीतिक खेल हो । कुनै पनि घटनालाई ती मानिसले रहस्यमय बनाउँछन् जसलाई त्यसका माध्यमबाट सक्ता, शत्ति र सम्पत्ति प्राप्त गर्नु छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , जेष्ठ १४, २०७६
धूलोको स्रोत पहिचान गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । खाल्डाखुल्डी पुर्ने, सडक किनारमा वृक्षारोपण गर्ने तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण त्यसको उपाय हुनसक्छ । पुरा पढ्नुहोस्
प्रिय साप्ताहिक ! तिमी रजत वर्ष मनाउने तयारी गरिरहेका छौ । यत्ति सुन्दा पनि खुब खुसी लागेको छ । किनभने यति लामो यात्रा गर्नु चानचुने कुरा होइन । तिम्रो उमेर बढ्नु भनेको बूढो हुनु होइन । संस्थागत रूपमा टिक्नु हो । कन्टेन्टमा परिष्कृत हुनु हो । विविधता थपिनु हो । मेरो पत्रिका पढ्ने बानीमा तिम्रो ठूलो भूमिका छ । पुरा पढ्नुहोस्
बेमौसमी वर्षा र बेमौसमी तरकारी उस्तै–उस्तै लाग्छन् । यी स्वास्थ्य र जीवनका लागि कम फाइदाजनक हुन्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
सानैमा पौडी खेल्न जाँदा मेरो एक जना साथी खोलामा डुबेको थियो । त्यो साथी आफूजस्तो पौडी खेल्न जान्ने कोही पनि छैन भनेर धाक लडाउँथ्यो । ऊ खोलामा पौडी खेल्दा डुबेपछि मैले नै उतारेर बचाएको थिएँ । उसलाई खोलाको किनारमा ल्याएपछि भने खित्का छाडेर हाँसेको याद छ । पुरा पढ्नुहोस्